MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA PUGGLE IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Puggle iyo Sawirada
Pug / Beagle ey isku dhafan oo isku dhafan
Molly the Puggle (Pug / Bealge mix) oo ah 1 1/2 sano jir
Khasaaruhu maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Gorgor iyo Baabuur . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan . Puggles-kii ugu horreeyay ee abid abid la cuno waxaa abuuray farcan la yiraahdo Wallace Havens.
'Tani waa Niles. Isagu waa 3 bilood boorso. Isagu waa eeyaha ugu saaxiibada badan, ee saaxiibtinimada iyo caqliga badan ee aad rabto. Wuxuu jecel yahay inuu nala seexdo sariirta weyn, nala cabbo casiirka karamberriga oo uu ku ciyaaro digaagdiisa cinjirka ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helnay eey noocaas ah oo jecel. '
Toby Puggle (Pug / Beagle breed breed) markay jiraan 17 bilood
'Tani waa Roxy the Puggle, oo lagu muujiyey halkaan isagoo 2 sano jir ah. Iyadu waa a ey daaweyn tababaran oo waliba jecel xasilloonida. Roxy waa eey cajiib ah waxayna jeceshahay inay muujiso xirfadaheeda kacsan markay booqanayso eeyga daweynta. Iyadu waa eey aad u faraxsan, laakiin waxay leedahay qaylo dheer. Boorsooyinku waa si fudud loo tababaray hadaad waqtiga qaadato oo aad samirto. Aad bay u jecel yihiin oo way jecel yihiin. '
Riley cunugga jilicsan ee Puggle ee jira 5 bilood
Charlie the Puggle oo 6 bilood jira (Charlie waa gabar)
Miller the Puggle (Pug / Beagle mix mix dog) markay jiraan 6 bilood
Mandy biilka midabkiisu yahay midabka midabkiisu yahay (Pug / Beagle ey isku dhafka ah) markay jiraan 15 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Gawaarida
Sawir gacmeedyada 1
Sawir gacmeedyada 2
doberman adhijir jarmal ah oo isku dhafan eeyo
sawirada eeyaha yaryar ee doberman
shetland ido dog iskudhaf retriever dahabka
xadka beagle eey isku darka collie